भूकम्पले घटाएकै हो त सगरमाथाको उचाई ? - ParyatanBazar.com
भूकम्पले घटाएकै हो त सगरमाथाको उचाई ?
पर्यटन बजार२७ चैत्र २०७५, बुधबार मा प्रकाशित
चैत २७, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पले सगरमाथाको उचाईमा कमि नआएको बताएका छन् । बुधवार विहान सगरमाथाको उचाइ मापन गर्न जाने सरकारी टोलीलाई बिदाइ गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सगरमाथाको उचाई घट्यो भन्ने कुरामा पत्यार नलागेको सुनाए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट नापी विभागको टोली विदाइ गर्दै उनले भने-भूकम्पले सगरमाथाको उचाइ घटेको भन्ने छ । तर मलाई भरपर्दो लागेन । केही समयअघि ८,८५० मिटर पुग्यो भन्ने पनि आयो । त्यही आसपासमा होला, घटेको हुनु नपर्ने हो
प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशीहरुले विभिन्न समयमा फरक-फरक उचाइ पेश गरे पनि आफूलाई भने विश्वास नलागेको बताउँदै विश्वको सर्वोच्च शिखर र नेपालको गौरव भएकाले यथार्थ उचाइ सार्वजनिक गरिने बताए ।
ओलीले एक सेन्टिमिटर पनि फरक नपर्ने गरी सगरमाथाको उचाइ नाप्न निर्देशन दिँदै भने-सगरमाथाको टुप्पोमा स्केल राखेर एक सेन्टिमिटर पनि फरक नपर्ने गरी यथार्थ उचाइ नाप्नुहोला । तर आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नू, बलजफ्ति नगर्नू ।
प्रधानमन्त्रीले मौसमले साथ नदिएमा वा स्वास्थ्यमा खराबी आउँदा आउँदै सगरमाथा आरोहण नगर्न सुझाव समेत दिए । उनले अनुभवी गाइडहरुले दिएको निर्देशनअनुसार चल्न सरकारी आरोहण टोलीलाई सुझाव दिए ।
सगरमाथाको उचाइ नाप्ने टोलीमा नापी विभागका प्रमुख खिमलाल गौतम, रविन कार्की, सुरज सिंह भण्डारी र युवराज धिताल रहेका छन् ।